विशेष – Banking Khabar
बैंक मर्जरमा कर्मचारी समायोजन मुख्य समस्या (रिपोर्टसहित)
बैंकिङ खबर । गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुको खुद मुनाफा छ अर्ब १८ करोड भन्दा माथि पुगेको छ । विकास बैंकहरुको नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को भन्दा ३२.८८ प्रतिशत बढेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय स्तरका ११ विकास बैंकको खुद मुनाफा चार अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ थियो । कामना सेवा विकास
वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जाः कुनको अवस्था कस्तो ?
बैंकिङ खबर । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार सबैभन्दा कम खराब कर्जा सानिमा बैंकको रहेको छ भने सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको छ । सरकारी स्वामित्वका तीन वटै बैंकमा खराब कर्जाको अनुपात बढी रहेको छ । दर्जन बढी बैंकको खराब कर्जा एक प्रतिशतभन्दा कम १३ वटा बैंकको खराब कर्जा एक प्रतिशतभन्दा
बैंकिङ खबर । सरकारको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नीतिका कारण गाउँगाउँमा बैंक पुगेका छन् । वाणिज्य बैंकहरु नै नेपालका अधिकांश स्थानीय तहमा पुगिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, ७३२ वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगिसकेका छन् भने बाँकीमा पनि पुग्ने क्रममा रहेका छन् । यसबाहेक, विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि दुर्गम स्थानहरुमा शाखा
बैंकिङ कसुरको घटनामा दर्जनौँ जेल चलान, कैयौँ फरार
बैंकिङ खबर । पछिल्लो समय बैंकिङ कसुरका घटना बढ्न थालेको छ । घरजग्गा दलालदेखि बैंकर एवम् मन्त्रीहरुसमेत यसमा मुछिन थालेका छन् । बैंकिङ कसुर लागेका केहीलाई जेल चलान गरिएपनि अझै कयौँ दोषीहरु फरार अवस्थामा छन् । सबैभन्दा बढी बैंकिङ कसुरका घटना काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दुई हजार ५६६
वाणिज्य बैंकहरुको रिपोर्टः गत आर्थिक वर्षमा कुनको नाफा कति ?
बैंकिङ खबर । २८ वटै वाणिज्य बैकहरुले गत आर्थिक वर्षको अपरष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । जसअनुसार, बाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षमा ६४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका छन्, जुन अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा २४.१६ प्रतिशत बढी हो । सबैभन्दा धेरै नाफा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कमाएको छ भने सबैभन्दा कम नाफा सिभिल बैंकले
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकको दीर्घकालीन अवस्था अझै कठोर हुने देखिएको छ । जसको सुरुवात राष्ट्र बैंकले गरिसकेको छः कहिले संचालक र सीईओको उमेरहद तोकेर र कहिले फोर्स मर्जरका लागि विभिन्न कदमहरु चालेर । फोर्श मर्जर नेपाल राष्ट्र बैंक कुनै पनि हालतमा वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जर गराउने सोचमा अघि बढेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरुलाई
बैंकिङ कसुर लागेका प्रदेशमन्त्री खत्री पक्राउ, मन्त्री पदबाट पनि बर्खास्थ
बैंकिङ खबर । बैंकिङ कसुरको घटनामा कीर्ते बैंक ग्यारेन्टी गरेको विषयलाई लिएर कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्गबहादुर खत्रीलाई पक्राउ गरिएको छ । उच्च अदालत पाटनले उनलाई दुइदिन अघि पक्राउ आदेश दिएको थियो । पक्राउ आदेश सँगै बैंकिङ कसुरमा मन्त्री खत्री पक्राउ परेपछि उनलाई प्रदेश सरकारले मन्त्री पदबाट बर्खास्थ गरेको छ । अदालतले मन्त्री खत्री
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नविल बैंक नाफामा अग्रणी
बैंकिङ खबर । हालसम्म २६ वटा वाणिज्य बैकको गत आर्थिक वर्षको अपरष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएको छ । जसअनुसार, सबैभन्दा धेरै नाफा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कमाएको छ भने सबैभन्दा कम नाफा सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले कमाएको छ । हेरौँ बैंकहरुको नाफा विवरणः राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकः पाँच अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कृषि विकास बैंकः चार अर्ब ३५
बैंकिङ खबर । विभिन्न सहुलियत दिएर राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गरेपछि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु धमाधम मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउन थालेका छन् । जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार ९१ वटा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या उल्लेख्य मात्रामा घट्ने देखिएको छ । मौद्रिक नीति आउनुअघि नै एक कार्यक्रममा गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले लघुवित्तहरुलाई पार्टनर खोजेर मर्जर प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएका
बाफिया संशोधन प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पुग्यो
बैंकिङ खबर । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ को संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले पठाएको मस्यौदामा केही थपघट गरी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रीपरिषद्मा दर्ता गरेका हुन् । मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएपछि अर्थमन्त्रीले वाफियालाई संसदमा पेश गर्नेछन् । संसदमा पेश गरिएको मस्यौदामा आवश्यक भए थप छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइन्छ
बैंकिङ खबर । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले धमाधम गत आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तीन दर्जनभन्दा बढी लघुवित्तले विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । शुक्रबारसम्ममा आरम्भ, फस्र्ट ग्लोबल आईएमई, कालिका, किसान, लक्ष्मी, महुली, मेरो, मिर्मिरे, आशा, नागबेली, नेशनल, नयाँ नेपाल, नेरुडे, एनएमबि आरएमडीसी, समता, आरएसडीसी, समिट, सपोर्ट, सूर्योदय, स्वाबलम्बन, स्वदेशी, स्वरोजगार, विजय, वोमी,
बैंकिङ खबर । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्वेच्छिक रुपमा नै मर्जरमा जान थालेका छन् । विशेषगरी वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा मर्जरको चटारो बढी देखिएको छ । सप्तकोसी र काबेली विकास बैंक तथा तिनाउ र मिसन विकास बैंकले मर्जर सम्पन्न गरिसकेका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्वतहमा महिला सहभागीता बढ्दै
बैंकिङ खबर । नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा महिला कर्मचारीहरुकोे सहभागीता बढ्दो छ । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा महिला कर्मचारीहरुले प्रमुख नेतृत्वमा बसेर समेत कार्यभार सम्हालेका छन् । अहिले केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा माथिल्लो तहमा बसेर काम गर्ने महिलाहरुको संख्या बढीरहेको छ । सरकारी होस् वा निजीक्षेत्रका बैंकिङ क्षेत्रमा महिलाले कुशलतापूर्वक नेतृत्व सम्हालिरहेका उदाहरण